【Igumbi eliyimfihlo - i-Kappa】 eline-Wi-Fi - I-Airbnb
【Igumbi eliyimfihlo - i-Kappa】 eline-Wi-Fi
高岡郡, 高知県, i-Japan
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Akinori
U-Akinori unokuphawula okungu-39 kwezinye izindawo.
"i-kappa back packers" yadalwa ngo-2018 yinsizwa enolwazi lomhlahlandlela wokuhamba. Ihostela lalungiswa lasuswa endlini yendabuko yaseJapan, futhi indawo ilungile. Kuthatha nje ukuhamba imizuzu engu-8 ukusuka eTokawa Station (JR Yodo line).
Ihostela liseduze kukaloliwe. Futhi, kukhona i-Kotatsu (I-kotatsu itafula lendabuko laseJapane, elimbozwe ngengubo futhi libe ne-heater ngaphansi ) endaweni evamile. Ungakwazi ukujabulela isiko lendabuko laseJapane.
Ehostela, kunamakamelo ama-4 (2 Igumbi langasese kanye negumbi lokulala eli-2). Igumbi ngalinye linesihloko esihlukile, futhi uzomangala ngomklamo walo oyingqayizivele.
Ekamelweni langasese kunombhede ongu-1 (waseNtshonalanga) nemibhede emi-2 (i-futon yaseJapane). Futhi, ungasebenzisa i-Wi-Fi, isomisi sezinwele, ishampoo, insipho yomzimba, amasethi ezitsheni zokupheka, ikhofi, itiye nokunye mahhala.
・ Kaiyodo figure Museum
・ Kappa Museum
・ Isiteshi somgwaqo "Towa" (Ukuqashwa kwebhayisikili, ikhefi, indawo yokudlela, i-wifi yamahhala)
Shimanto Kappa Kumiai (Japanese traditional boat tours)
・ i-groove yemvelo (Rafting)
Isikhungo se-Furusato koryu(Ukuqashwa kwebhayisikili, i-Rafting, i-Kayak)
・ I-Canoe Kan (Ukuqashwa kwebhayisikili, i-Rafting, i-Kayak)
・ Intwasahlobo eshisayo yaseTowa
Umsingathi kanye nabasebenzi basehostela bazohlala endaweni evamile kuze kube ngu-11 PM, Uma unemibuzo, vele ubuze. Ngendlela, sipheka isidlo sakusihlwa nsuku zonke, futhi wamukelekile ukujoyina nathi. Singathanda ukwabelana nawe ngezidlo zomdabu zase-Japan, kodwa usanda kukhokha izindleko zokudla.
Umsingathi kanye nabasebenzi basehostela bazohlala endaweni evamile kuze kube ngu-11 PM, Uma unemibuzo, vele ubuze. Ngendlela, sipheka isidlo sakusihlwa nsuku zonke, futhi wamukele…
Inombolo yepholisi: I-Hotels and Inns Business Act | 高知県須崎保健所 | 高知県指令２８高須保第１３５号
Hlola ezinye izinketho ezise- 高岡郡 namaphethelo